आफ्नो सुरक्षा आफैँ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
१८ असार २०७७, बिहीबार १८:४२
आज लकडाउनको ८५औं दिन ! लकडाउनमा बिताएका दिनबारे कसरी व्यक्त गरूँ भनेर मैले मेसो पाएकी छैन । यी दिनहरूलाई म राम्रो भनौं कि दिक्दारलाग्दो भनौं भनेर म अलमिलएकी छु । यस्तो कुरा भुल्न म घरी नयाँनयाँ परिकार बनाउँछु घरी टिकटकमा फरकफरक आइडिया लगाएर भिडियो बनाउँछु ।
तैपनि अहँ मन खुसी हुन्न । खाना खानेहरू र टिकटक हेर्नेहरू गज्जब भनेर कमेन्ट गर्छन् तर आफूलाई भने यी काम समय बिताउन मात्र गरेको हो, खास होइन जस्तो लाग्छ । धन्न मेरा चार जना दिदीबहिनी भएकाले मलाई केही राहत भएको छ । नत्र त एक्लोपनले पागल बनाउँथ्यो होला । यस्तो बेलामा ठूलो परिवारको महत्व हुने रहेछ । कसैले अनुसन्धान गरेको छ कि छैन थाहा छैन तर ठूलो परिवारमा हुनेहरू सानो परिवारमा हुनेहरूभन्दा बढी खुसी र कम निराश हुन्छन् होला ।
चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लक्ड दिन आज असार ६ गतेसम्म आइसक्दा पनि यथावत् छ । निजी गाडी चलाउन र हिँड्न पाउने नियम आउँदा मलाई खास केही फरक परेको छैन । आफ्नो गाडी नभएका हामीहरूलाई सार्वजनिक गाडी नखुलेसम्म के खुकुलो के राहत ।
लकडाउनका तीन महिना चैत, वैशाख, जेठको लक्ड लाइफमा मेरो पढाइदेखि लिएर काम अनि सामाजिक जीवन पूरै लक्ड भयो । मेरो मात्र होइन शायद सबैको ।
कलेज सकिन सकिन आटेको थियो । अब के हुने हो थाहा छैन । काम भर्खर भर्खर सिक्दै थिएँ । त्यो पनि के हुने हो थाहा छैन । पूरै अन्योल छ । कोरोना महामारी जस्तै मेरो भविष्य पनि पूरै अन्योल भए जस्तो लाग्छ घरीघरी । अन्योल कुन हिसाबले भने अब धेरैले रोजगारी नपाउने सम्भावना छ, धेरैले रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ भन्ने हल्ला छ । कामको भविष्य खतरामा हुँदा आफ्नो भविष्य पनि खतरामा पर्छ । यस्तो डरले गर्दा साह्रै दिक्क लागेको छ किनभने कामको दुनियाँमा भिड्नलाई हामी भर्खर तयार हुँदै थियौं ।
तैपनि दाइ दिदीहरूसँग कुरा गरेर सकारात्मक हुन खोज्छु । अरू उपाय पनि त छैन । सधैं नकारात्मक भएर निरास हुनुभन्दा जे जस्तो अवस्था छ त्यसलाई स्वीकारेर समाधानका उपाय खोज्नु उचित हो भनेर नयाँनयाँ कुरा सिक्न खोजिरहेकी छु ।
म सामाजिक मान्छे । काम नभए पनि घरी कहाँ घरी कहाँ डुलिरहनुपर्ने बानी हुन्छ । घरी कामले घरी साथीहरूसँग त घरी केही सामाजिक काममा भ्याएसम्म पुगिहाल्ने बानी छ मेरो । लकडाउनमा सामाजिक जीवनको के कुरा गर्नु ? यसरी म घर बस्दा मलाई मात्र होइन मेरो परिवारलाई पनि अचम्म लागेको छ । उस्तै परे शनिबार पनि घरमा बास हुन्नथ्यो मेरो । केही काम नहुँदा पनि मोमो चाख्ने बहानाले बसन्तपुर जान्थेँ, चिया खाने बहानाले भृकुटीमण्डप र समोसा खाने बहानाले टिपटप जान्थेँ । चोकमा चटपट खाने बहानाले साथीहरूसँग गफ्फिन कुदिहाल्थेँ । आजकल बसन्तपुर र अरू गल्लीको त कुरै छाडौं घर अगाडि निस्कन पनि कति पटक सोच्नुपर्छ । पढाइ र कामको हिसाबले मात्र होइन डुल्ने हिसाबले पनि लक्डडाउनको समय बडो उराठलाग्दो हुने रहेछ । शान्त र स्वतन्त्र भएर बस्यो भने कुनै कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन्छ भन्थे मान्छेहरू । तर मेरो सातोपुत्लो उडिसक्यो । धन्न मेरा ममीहरू घरमा बस्न सक्नुहुँदो रहेछ । मलाई अहिले उहाँहरू देखेर बडो अचम्म लाग्छ ।
जाबो मान्छेको के कुरा गर्नु ! लकडाउनले त भगवानको चहलपहललाई समेत रोकिदिएको छ । यसअघि हाम्रो जात्रा रोकिएको मलाई थाहा थिएन । उहिलेदेखि चलिआएको भगवानको रथयात्रा समेत रोकिदियो यो कोरोनाले । कत्रो तागत रहेछ यस भाइरससँग !
मलाई जात्रा एकदम मनपर्छ । म समाजमा घुलमिल गर्न रुचाउने मान्छे भएर पनि होला । जात्रा एक वर्षमा बल्लबल्ल एक पटक आउँछ । आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न, भीडभाडमा रमाउन, रथ तानेको दृश्य हेर्न, भोज खान, धिम्या बाजा बजेको सुन्न, धिम्याको तालमा सडकमा नाच्न कम्ता रमाइलो हुन्न । तर के गर्नु यो वर्ष जात्रा बिनै, सुनसानमै सकियो । भाइरसको तागत ठूलो हो कि भगवानको तागत सानो ? आफ्नो उत्सव मनाउन नपाएर भगवान पनि लाचार भएको देखेर मलाई दिक्क लाग्यो ।
भगवान भरोसाले गर्दा कोरोनाले हाम्रोमा उस्तो आतंक मच्चिएको छैन भनेर मानिसहरू भन्थे । खै त्यस्तो त कहाँ होला र ! भगवानको कुरो भगवानलाई नै थाहा होला । तर पशुपतिनाथले जोगाउँछन् भनेर बस्यो भने अबको केही दिनमा हाम्रो हालत इटाली, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकाको जस्तो हुन बेर लाग्दैन ।
रुघाखोकी पचाए जस्तै गरी पचाइदिनुपर्छ यो भाइरसलाई भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो । समाचारमा उहाँको यस्तो कुरा सुन्दा त्यसो भए यत्रो दिनदेखि हामीलाई किन घरभित्र थुनेको त भन्ने लाग्यो ?
संक्रमित दिनदिनै बढ्दै छन् तर सुरक्षातिर हाम्रो ध्यान भने घट्दो छ । टोल तिरको चटपटे पसल, चिया पसल, तरकारी पसलतिर मान्छे सल्बलाइरहेका छन् । यस्तो देख्दा लाग्छ मान्छेहरूलाई आफ्नो बानी आफ्नो जीवनभन्दा पनि प्यारो लाग्दो रहेछ । त्यही भएर त मानिस आफ्नो जीवनलाई जोखिखममा पारेरै भए पनि आफ्नो बानी, आफ्नो मनको इच्छा पूरा गर्नतिर लाग्छ ।
तर म चाहिँ अहिले यस्तो गर्दिनँ । हामी सतर्क हुनैपर्छ नत्र हामीलाई कोरोना लाग्न बेर लाग्दैन । जीवनमा रोगसँग कहिल्यै खेलाँची गर्नु हुन्न । यसले न धनी भन्छ न गरिब भन्छ न पशुपतिनाथको देशको भन्छ न त ओली या ट्रम्पको देश भन्छ, न काठमाडौंको भन्छ न सीमामा रहेको जिल्लाको न भारतबाट आएका मजदुर भन्छ न सुटबुट लाएर अफिसमा काम गर्ने मान्छे भन्छ । त्यसैले आफू जति बढी सतर्क भयो त्यति राम्रो । मेरो स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति म आफै हुँ ।
संस्था र सदस्य दुवैलाई समस्या
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १६:०६